Saadaasha Dimitar Berbatov Ee Kulamada Toddobaadkan - Liverpool Oo Uu Guul Uga Dhaartay & Waxa Uu Ka Yidhi Arsenal & Man United - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaSaadaasha Dimitar Berbatov Ee Kulamada Toddobaadkan – Liverpool Oo Uu Guul Uga Dhaartay & Waxa Uu Ka Yidhi Arsenal & Man United
Saadaasha Dimitar Berbatov Ee Kulamada Toddobaadkan – Liverpool Oo Uu Guul Uga Dhaartay & Waxa Uu Ka Yidhi Arsenal & Man United
Dimitar Berbatov ayaa soo saaray saadaashiisa kulamada horyaalka Premier League ee toddobaadkan, waxaana uu guul uga dhaartay Liverpool oo rajaynaysay in ay sare ugu ruqaansato kaalmaha hore, ayna ka faa’iidaysato haddii ay West Ham badin weydo.
Reds oo kaalinta labaad ku jirta ayaa laba dhibcood ka hoosaysa Chelsea oo ciyaaraysa FA cup, waxaana haddii ay Liverpool guuleysato ay dhibco ahaan isku mid noqon doonaan West Ham oo iyaduna la ciyaaraysa Crystal Palace, laakiin waa haddii laga badiyo.
Tababare Jurgen Klopp oo tartanka kaliya ee uu ku jiraa uu yahay in uu ka mid noqdo afarta sare ayaa ku ducaysanaya in la garaaco West Ham, si kooxdiisu ay uga faa’iidaysato oo ay afraad u fadhiisato, laakiin xataa haddii ay u rumowdo, waxa booska kala bixi doonta Chelsea marka ay ciyaarteedan baaqanaysa dib ka ciyaarto.
Liverpool ayaa Isniinta la ciyaari doonta Leeds United oo ay ugu tegayso Elland Road, waxaana Dimitar Berbatov oo ciyaartan iyo kulamada kaleba saadaaliyey uu ugu sii bushaareeyey Jurgen Klopp iyo xiddigihiisa in ay dhibco soo lumin doonaan, ayna kaliya barbarro kala soo laabanayaan Leeds.
Waxa kale oo uu Dimitar Berbatov saadaal naxdinle siiyey West Ham United oo uu u sheegay in ay guul-darro kala soo kulmi doonaan Crystal Palace oo ay Sabtida maanta la ciyaarayaan, taas oo haddii ay rumowdo sababi karta, in Hammers ay lumiso booskeeda afraad.
Manchester United iyo Arsenal ayaa uu labadoodaba guul ugu bushaareeyey Dimitar Berbatov.
Halkan kaga bogo saadaasha Dimitar Berbatov ee kulamada Premier League ee usbuucan: